Iindaba -Inzwa kumatshini wokubekwa kwe-SMT ibaluleke kakhulu, inohlobo oluthile
Inzwa kumatshini wokubekwa kwe-SMT ibaluleke kakhulu, inohlobo oluthile
Umatshini wokubekwa ulingana neerobhothi ezizenzekelayo. Zonke izinto ezenziwayo zigqithiswa ngabenzi boluvo emva koko bagwetywe kwaye basebenze ngengqondo ephambili. Amashishini eTopco aza kwabelana nawe ukuba umatshini wokubekwa unohlobo oluthile lwenzwa.
1. Isithinteli soxinzelelo
Umatshini wokubekwa, kubandakanya iisilinda ezahlukeneyo kunye neejenereyitha zokucoca, ineemfuno ezithile zoxinzelelo lomoya. Xa uxinzelelo olufunwa sisixhobo emva koko luyafuneka, umatshini akanakusebenza ngesiqhelo, kwaye isivamvo soxinzelelo lomoya sihlala sijonga utshintsho koxinzelelo. Xa ingaqhelekanga, iya kuba nealam ngokukhawuleza, Ukukhumbuza umqhubi ukuba ajongane nayo ngexesha.
2. Inzwa yoxinzelelo olubi
Umbhobho wokutsala womatshini wokubekwa utsala izinto ngoxinzelelo olubi, oluqukethe umvelisi woxinzelelo olubi (i-jet vacuum generator) kunye ne-sensor vacuum. Ukuba uxinzelelo olubi alonelanga, izinto aziyi kuba nakho ukufunxwa. Xa i-feeder ingenawo amacandelo okanye izinto zixinene ebhegini yezinto kwaye zingenakunyuswa, umlomo wokutsala awuyi kuwanya amacandelo. Ezi meko ziya kuchaphazela ukusebenza kwesiqhelo kumatshini. Inzwa yoxinzelelo olubi ihlala ijonga utshintsho olubi. Xa izinto zingenakunyiswa okanye zingenakunyiswa, inokukhawulezisa i-alamu ukukhumbuza umqhubi ukuba athabathe indawo ye-feeder okanye ajonge ukuba ngaba inkqubo yokucinezelwa kwemilomo engamanzi ifakiwe.
3. Isivamvo somfanekiso
Umboniso wexesha lokwenyani lobume bokusebenza komatshini wokubekwa ubukhulu becala usebenzisa isixhobo somfanekiso weCCD, esinokuqokelela imiqondiso yemifanekiso eyahlukeneyo, kubandakanya indawo yePCB, ubungakanani besixhobo, kunye nohlalutyo lwekhompyuter kunye nokusebenza, ukubekwa intloko inokugqibezela uhlengahlengiso kunye nomsebenzi wokubekwa.
4. Isithuba isivamvo
Ukuhanjiswa nokubekwa kwebhodi eprintiweyo, kubandakanya ukubalwa kwee-PCBs, ukubonwa kwexesha lokwenyani lokuhamba kwentloko yokubekwa kunye nokusebenza, kunye nokuhamba kwendlela encedisayo, zonke zineemfuno ezingqongqo kwisikhundla. Ezi zikhundla kufuneka zifezekiswe ngeendlela ezahlukeneyo zeenzwa zesithuba.